Fitaterana: saran-dalana tokana ny 400 Ar | NewsMada
Fitaterana: saran-dalana tokana ny 400 Ar
Vitsivitsy ireo taxi-be nitazona ny saran-dalana ho 400 Ar eto Antananarivo Renivohitra. Anaovany peta-drindrina mihitsy fa mbola 400 Ar ny saran-dalana ka ifarombahan’ny mpandeha izy ireny.
Mazava kosa anefa ny lalao ho an’ireo zotra mitazona ny saran-dalana ho 400 Ar ireo fa tsy misy intsony mihitsy ny tapa-dalana. Tokana io saran-dalana io fa tsy mandray 200 Ar na 300 Ar intsony izy ireo, eny fa na akaiky aza ny aleha.
Fanapahan-kevitra ifanarahan’ireo kaoperativa vitsivitsy io fitazomana ny saran-dalana ho tokana io. Natao izany ho fitsinjovana ny vahoaka. Mihoa-pampana ny fanararaotana sy ny fakana tombony raha 100 Ar isaky ny litatra ihany ny fisondrotan’ny lasantsy ka alaina amin’ny mpandeha tsirairay koa io 100 Ar io amin’ny alalan’ny fampisondrotana ny saran-dalana.
Anisan’ny mitazona ny saran-dalana ho 400 Ar ny kaoperativa Tselatra misy ny zotra 147, 146, 178… Eo koa ny 162.
Etsy andaniny, miaritra ny saran-dalana 500 Ar ireo tsy maintsy mandeha amin’ireny zotra nampiakatra saran-dalana ireny fa tsy afa-manoatra. Misafidy ny mifoha maraina ka miezaka mandeha an-tongotra kosa ireo mianatra na miasa akaikikaiky.